GAALKACYO, Soomaaliya - Duqeymaha dhanka cirka ah ayaa maalmihii ugu dambeeyay joogto ka noqday koonfurta gobolka Mudug, ee bartamaha dalka Soomaaliya.
Diyaaradaha Mareykanka ayaa saddex weerar ka fuliyay degaano hoostaga degmada Xarardheere, halkaasi oo lagu dilay ugu yaraan 37 xubnood oo katirsan Kooxda Al-Shabaab, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay shalay AFRICOM.
Duqeymaha ayaa ka kala dhacay tuulooyinka Dabad-Shiil, Cadaleey, Maamiye iyo Kulu, oo dhamaantooda ay maamusho Al-Shaabab, waxaana AFRICOM ay sheegtay in duqeymahan ay gacan ka siisay dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dadka shacabk ah ee ku nool Koonfurta gobolka Mudug ayaa soo wajahday cabsi xooggan oo ku aadan duqeymaha diyaaradaha Mareykanka, kuwaasoo kasoo dhasha khasaarooyin rayidka soo gaara.
Waa duqayntii 4aad oo sanadkaan gudahiisa uu Mareykanka ka fuliyo gobolka Mudug xili bishii hore ay ahayd markii meel ku dhow degmada Xarardheere lagu dilay ku dhowaad 60 kamid ah Al-Shabaab.
Mareykanka ayaa tan iyo markii Trump la doortay dhamaadkii 2016, waxa ay ciidamadiisa ka jooga Africa kordhiyeen weerarada duqeymaha ah ee ka dhanka ah Kooxaha argagaxisada ku sugan Soomaaliya, gaar ahaan Al-Shabaab iyo Daacish.
10-jir aan gacmo ku dhalan oo ku guuleystay tartan far-qurxin 24.04.2019. 19:44
Sacuudiga oo gowracay 37 qof oo ku eedaysan argagixisinimo 24.04.2019. 15:50
Kim oo tareen gaashaaman ku tegay Ruushka kahor kulanka Putin 24.04.2019. 15:18
Puntland oo fulineysa xeerka Kufsiga xili ay cadaalad sugayaan dhibanayaal 24.04.2019. 13:14
Faahfaahin ku saabsan Khasaaraha Qaraxii Boosaaso 24.04.2019. 12:28